IGolden obsidian, ebizwa nangokuthi i-sheen obsidian yegolide, i-sheen obsidian, ividiyo
Amathegi Golden, Obsidian, sheen
IGolden obsidian, ebizwa nangokuthi yi-sheen obsidian noma i-sheen obsidian iyitshe liqukethe amaphethini wamabhamuza wegesi, asele ekugelezeni kwe-lava, ahlanganiswe eduze kwezendlalelo ezakhiwe njengoba idwala elincibilikisiwe laligeleza ngaphambi kokuphola. Lawa mabhamu akhiqiza imiphumela ethandekayo ibukeka njenge-sheen yegolide.
IGolden obsidian ingilazi eyenzeka ngentaba-mlilo eyenzeka njengedwala elikhulukazi.
Kukhiqizwa lapho i-felsic lava ikhishwa kusuka ku-volcano ibanda ngokushesha ngokukhula okuncane kwekristalu. Ngokuvamile kutholakala ngaphakathi kwemigqa ye-rhyolitic lava flows eyaziwa ngokuthi i-obsidian flows, lapho ukwakheka kwamakhemikhali, okuqukethwe okuphezulu kwe-silica kubangela ukuvela okuphezulu okuthi lapho sekupholile ngokushesha, kwakheke ingilazi yemvelo kusuka kumalahle. Ukuvinjwa kokuqhekeka kwe-athomu ngokusebenzisa le lava e-viscous kakhulu kuchaza ukungabikho kokukhula kwekristalu. IGolden obsidian ilukhuni, ayisiqholo, futhi i-amorphous, ngakho-ke iqhekeka ngemiphetho ebukhali kakhulu. Esikhathini esedlule yayisetshenziselwa ukwenza amathuluzi okusika nokubhoboza futhi ibisetshenziswa njengezivivinyo zokuhlinzwa njenge-scalpel blade.
Akuwona amaminerali weqiniso ngoba njengengilazi akuyona i-crystalline, futhi, ukwakheka kwayo kuyahlukahluka kakhulu ukuthi kungahlukaniswa njengamaminerali. Kwesinye isikhathi kubhekwa njenge-mineraloid. Yize i-Golden obsidian ivame ukuba mnyama ngombala, ifana namadwala e-mafic afana ne-basalt, ukwakheka kwe-obsidian kukhulu ngokweqile. I-Obsidian iqukethe ikakhulukazi i-SiO2, i-silicon dioxide, imvamisa i-70% noma ngaphezulu. Amatshe e-Crystalline anokwakhiwa kwe-obsidian afaka i-granite ne-rhyolite. Ngoba i-obsidian iyakwazi ukujikijela ebusweni bomhlaba, ngokuhamba kwesikhathi ingilazi iba amakristalu amaminerali acoliseke kahle, akukho obsidian okutholakele ukuthi indala kuneminyaka yobudala yaseCretaceous. Lokhu kwephuka kwe-obsidian kusheshiswa ngokuba khona kwamanzi. Ukuba nokuqukethwe kwamanzi aphansi lapho kusanda kwakhiwa, imvamisa kungaphansi kwe-1% lamanzi ngesisindo, i-obsidian iba manzi ngokuqhubekayo lapho ivezwa emanzini angaphansi komhlaba, yakha i-perlite.
Izinkanyezi zobusuku obunye
Amathegi Obsidian, Ogcwele Izinkanyezi ebusuku
Igolide legolide elimhlophe
Amathegi Gold, Golden, Sapphire
Amathegi Obsidian, Snowflake